About Us - Zhejiang Yaonan Electric Co., Ltd.
Komsele futhi Joint
Plastic Nail Inwebisa
Plastic Wire imbobo
Isikulufa On Wire Isixhumi
Isikhumulo Block PA10
Manzi Junction Ibhokisi
Zhejiang Yaonan Electric Co., Ltd. Yasungulwa ngo 2017 nge capital olubhalisiwe 10 million Yuan (Ngaphambili okuthiwa Yueqing Yaonan Electric kwemboni, eyasungulwa ngo-1996). Inkampani Itholakala China Electric Zikagesi Capital - Liushi, Yueqing, kuyinto ezimbonini kanye ukuhweba ukuhlanganiswa ibhizinisi, onguchwepheshe imikhiqizo plastic, voltage high and low zikagesi futhi amathuluzi namamitha ukukhiqizwa.
Inkampani ikakhulu ukhiqiza: Inayiloni uthayi engagqwali uthayi Steel nail wire ikhadi, angangenwa manzi ikhebula ndlala block esibulalayo, wesifunda full, imitha pointer, imitha digital futhi imitha amandla njll Imikhiqizo kabanzi namasevisi: imishini, amandla, electronics, ukuxhumana, ezempi, ngisemsebenzini, yokusansimbi, Petrochemical, ukukhanyisa, wesitimela zokuthutha kanye nezinye izimboni. Imikhiqizo lithunyelwa eNyakatho Melika, i-Ningizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika naseNingizimu-mpumalanga Asia, ezifana emazweni angaphezu kuka-90 kanye nezifunda.
Le nkampani ihlanganisa indawo ka 17000 square metres, nabasebenzi abangaphezu kuka-500. zokuthutha Elula, eduze Shanghai, Ningbo nezinye nezimbobo. Le nkampani ine umkhiqizo oqinile futhi lokusungula, uye abe okhokhelwayo, ezinkulu kanye netinsita yokukhiqiza amabhizinisi njengoba omunye imikhiqizo kwamanye amazwe.
Inkampani uyaqhubeka ukwethula eziphambili imishini ukukhiqizwa futhi professional izisebenzi lobuchwepheshe kanye nokuphathwa, ukuqinisekisa imikhiqizo izinga okusezingeni nokwaneliseka kwamakhasimende. Le nkampani iye etholwe ISO9001 izinga uhlelo kutfolwa kwetitifiketi kanye CCC, CMC, SGS, CE, KEMA, RoHS, CB futhi BV nezinye izitifiketi ezifuywayo international.
Inkampani ifa inhloso inkonzo "izinga lokuqala, esekelwe udumo, ikhasimende kuze kakhulu", lonke heartedly ukudala ikusasa enhle namakhasimende amasha namadala isandla.
IPHANSI 5th, NANRUIGUOWANG BUILDING, SANTIAOQIAO, LIUSHI, YUEQING, Zhejiang, 325603 ECHINA
Sishayele manje: 0577-62697732